အသက် ၅၃ နှစ်ပြည့်သွားတဲ့ ဒွေးအတွက် သားညီရဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်း | Duwun
အသက် ၅၃ နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ဒွေးအတွက် ညီဖြစ်သူ သားညီကတော့ မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားတွေ ပြောလာပါတယ်။ ကျေးဇူးဆပ်ခွင့်မရလိုက်တာကြောင့်လည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်လို့နေပါတယ်။
မေလ ၇ ရက်နေ့ကတော့ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် ဒွေး(ခ) ကိုသားကြီးရဲ့ အသက် ၅၃ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒါရိုက်တာသားညီက အစ်ကိုကြီးဖြစ်သူအတွက် သတိတရနဲ့ မွေးနေ့ ဆုတောင်းစကားဆိုထားပါတယ်။
‘’7.5. 2019 သူ မရှိတော့ဘူးဆိုပေမယ့် ရှိနေသေးသလိုပဲ အမြဲခံစားမိနေလို့ပါ။ ဘယ်တော့မှလည်း မေ့ပျောက်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီစကားကို ပြောကောင်းသလား၊ မပြောကောင်းဘူးလားလည်း မသိပါဘူး။ တကယ်လို့များ နောက်ဘဝဆိုတာရှိခဲ့ရင် အဲဒီ ဘဝမှာလည်း လူဖြစ်ခွင့်ရကြပြီး အခုဘဝလိုမျိုး တော်စပ်ပတ်သက်ခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင် အခုပြောမယ့်စကားလေးကို နှစ်ပေါင်းများစွာ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ခဏ ခဏ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ပြောခွင့်ရပါစေလို့ ကျွန်တော် လေးလေးနက်နက် ဆုတောင်းနေပါတယ်။ ‘’Happy Birthday’’ ပါ Bro ကျေးဇူးဆပ်ခွင့်မရလိုက်တဲ့ သားညီ’’ ဆိုပြီးတော့ မေလ ၇ ရက်နေ့ မနက် ၁၂ နာရီ ၃ မိနစ်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ဇူလိုင်မိုးစက်တွေကြားထဲမှာ ပရိသတ်တွေကို နှုတ်ဆက်သွားခဲ့တဲ့ ဒွေးဟာ သရုပ်ဆောင် လောကမှာ ပရိသတ်များစွာတို့ရဲ့ အချစ်တွေ အခိုင်အမာရရှိခဲ့သူ၊ အောင်မြင်ခဲ့သူပါ။ ပရိသတ်တွေသာမက အနုပညာမောင်နှမများက ကိုသားကြီးလို့ ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ ဒွေးရဲ့ နာမည်အရင်းက ထင်လင်းပါ။
ထင်လင်း(ခ)ဒွေးဟာ Y.I.T ကနေ အင်ဂျီနီယာဘွဲ့ရထားသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ စက်မှုအင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဒွေးဟာ ဘွဲ့မရခင်ကတည်းက အနုပညာလောကထဲကို စတင်ခြေချခဲ့တာပါ။ ဦးလေးဖြစ်သူ ကျော်ဟိန်း နဲ့ အတူ ဇာတ်ကားတွေ ရိုက်ကူးခဲ့ရင်း အနုပညာလောကထဲ ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
ဦးကျော်ဟိန်းကိုယ်တိုင် ဒါရိုက်တာအဖြစ် ရိုက်ကူးထား တဲ့ "ဒုက္ခကိုအရောင်းဆိုးတယ်" မူးယစ်ဆေးဝါးပညာပေး ဗီဒီယိုကားနဲ့ စပြီး ပရိသတ် တွေ စသိခဲ့ရာ 'ဝေလည်းမွှေးကြွေလည်းမွှေး' ရုပ်ရှင်ကားမှ စပြီး ပရိသတ်တွေကြား အောင်မြင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒွေးဟာ ၁၉၉၇ခုနှစ်မှာ "အမေ့ခြေရာ"ဇာတ်ကားနဲ့ အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆုကို ရရှိခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာ ၊ဗီဒီယိုဇာတ်ကားပေါင်းများစွာနဲ့ ကြော်ငြာများစွာကို ရိုက်ကူးခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။